तिहार विशेष : धनका सय बाटा | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधारियो : विश्व बैंक
प्रधानमन्त्री फर्किँदा उड्न ठीक्क परेको जहाज रोकियो, यात्रुको विरोध →
कैयौं वर्षमा एउटा प्रतापी राजा निस्किन्थ्यो  । उसको मनमा आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने वा छिमेकी कुनै राज्यसँग बदला लिने विचार पलाउँथ्यो  । अनि उसले आफ्नो राज्यका जवानहरूलाई सेनामा भर्ती हुन आग्रह गर्थ्यो । कुनै खास उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सेनाको विस्तार गरिन्थ्यो । सेनामा आउनेले तलब पाउँथेनन् । उनीहरूलाई दिने एउटै चिज हुन्थ्यो– जितेको राज्यको जमिन । जमिन प्राप्तिका लागि जवानहरू लडाइँमा होमिन्थे । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग जग्गा पाउने अरु कुनै उपाय थिएन । कि त राजा महाराजाका आफन्त, खास भारदार र पुरोहित हुनुपर्थ्यो । यसमा उच्च जात र कुलका मानिस आसिन हुन्थे । जनताका लागि कि त लडाइँमा लडेर आहुति दिने कि युद्ध जितेर जमिन जोड्ने बाटोमात्रै हुन्थ्यो ।
यसरी सुरु भएको जमिनको कारोबार अहिले देशमा सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने माध्यम बन्न पुगेको छ । आज जग्गा जोड्न न त युद्ध लड्नुपर्छ न राजा महाराजाको भारदार हुनुपर्छ । बस, तपाईंसँग अलिकति पैसा र राम्रो जग्गा खोजिदिने दलाल भए पुग्छ । जग्गा दलाली वा कारोबारी पछिल्लो समय सर्वाधिक सुरक्षित तरिकाले छिटो पैसा कमाउने व्यवसाय बनेको छ । यसमा यति धेरै पैसा लगानी हुन थाल्यो कि राष्ट्र बैंकले नै लगानीका लागि बैंकहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्‍यो । पहिले जग्गामा आकर्षण किन थियो भने, उत्पादन र धन आर्जनको अरू कुनै उपाय थिएन । अहिले भने धन कमाउने सयौं नयाँ क्षेत्र र बाटा खुलेका छन् । केही त यस्तासम्म छन्, जस’bout केही वर्षअघिसम्म कसैले सोच्दैनथे । तेल र गहनासँगै संसारमै ठूलो कारोबार रियल स्टेटको हुने गरेको छ । यस्तो होला भनेर धेरैले सोचेका थिएनन् ।
हालै भारतले निकै थोरै खर्चमा एउटा यान चन्द्रमामा पठायो । चन्द्रयानको यो अभियान’bout आफ्नो लम्बेतान व्याख्यामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा निकै रोचक कुरा बताए । उनले भने, ‘हामीले यो यान हलिउडको एउटा फिल्मको बजेटभन्दा पनि कम खर्चमा पठायौं ।’ चन्द्रमामा यान नै पठाउनभन्दा महँगोमा फिल्म बनाउने हलिउडले कारोबारचाहिँ कति गर्ला ? २०१४ को एउटा तथ्यांकअनुसार हलिउडको वार्षिक टर्नओभर १० अर्ब डलरभन्दा बढी छ ।
राजा महाराजासँग मात्रै देशको सबै धन जम्मा हुने व्यवस्था कुनैबेला थियो । त्यसपछि पनि केही सीमित व्यापारी र राज्य संयन्त्रका वरिपरि हुनेहरूको हातमा मात्रै हुन्थ्यो । बिस्तारै राजनीतिले सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै लगेपछि धन पनि राजनीति गर्नेहरूका ’round थुप्रिनु कुनै नौलो भएन । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापारीभन्दा राजनीतिक व्यक्ति र नेताहरू भ्रष्टाचारका काण्डमा पर्नु सायद यसैको उदाहरण हो । सामन्तवादी समाजमा ‘ठूला मान्छे’ सँग मात्र धन हुन्थ्यो । तर, पुँजीवादको प्रसार र औद्योगिक क्रान्तिपछि उद्यमशीलको हातमा पुँजी आयो । धनको वितरण कुल र जातको आधारमा मात्र हुन छोड्यो । तर, नेपाली समाजमा भने अझै पनि धनले कुल र जात हेर्न पूर्णतः छोडिसकेको छैन । कला, प्रविधि र खेलकुदको विकास तथा गैरसरकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै राजनीतिक नेतृत्वको हातबाट शक्ति र पैसा बिस्तारै धेरै क्षेत्रमा फैलिन थालेको छ । जति तलसम्म धनको प्रवाह हुन सक्यो र स्रोतहरूमा जति धेरै मानिसको पहुँच भयो त्यो समाज त्यति धनी हुन्छ । सीमित मान्छे वा सीमित काममा मात्रै धन भयो भने समाजमा धनी गरिबको खाडल पनि त्यति नै ठूलो हुँदै जान्छ भनेर विद्वान्हरूले भनेका छन् ।
फरक र रचनात्मक तरिकाले काम गर्न चाहने युवाको संख्या बढिरहेकाले हाम्रो समाजमा पनि धनका अझै नयाँ बाटाहरू खुल्दै जानेछन् । त्यो बौद्धिक सम्पत्ति वा रचनामाथि कुनै एउटा समूहको मात्र नियन्त्रण नरहेको खण्डमा यी सय बाटामा जो पनि हिँड्न सक्नेछ । यी धेरै बाटाले समाजमा धनप्रतिको आशक्ति पनि अतिरिक्त रूपमा बढ्दो छ । यसले जन्माएका अपराधका कथा पनि छन् । डरचाहिँ यत्ति हो– मान्छेले धनको बाटो हिँड्नुको साटो कतै बाटाहरू नै मान्छेमाथि नहिँडुन् !(कान्तिपुर )